प्रतिभा Archives - Khapung.com
काठमाडौं, १७ पुस । डा. अन्जु खापुङको स्वरमा ‘जुनी जुनीभरिलाई...’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । यस गीतको शब्द, संगीत पनि अन्जुकै छ । गीतको एरेन्ज अर्जुन रावतले गरेका हुन् भने मिक्सिङ र मास्टरिङ रेशम गदालले गरेका हुन् । होराइजन रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको गीतलाई भिडियो तथा एनिमेशन डा. विदुर अधिकारीले गरेका छन्...
काठमाडौं, ५ पुस । सन् २०१५ मा मिस पूर्वेली सुपरमोडल विजेता बनेकी सुम्निमा खापुङ पहिलोपटक म्युजिक भिडियोमा देखिएकी छिन् । मेलिना राईको स्वरमा रहेको गीत ‘माया देउ…’ म्युजिक भिडियो सुम्निमा देखिएकी हुन् । तेह्रथुमको साविक मोराहाङमा खगेन्द्र खापुङ र शर्मिला देवान खापुङकी छोरी सुम्निमा कलाकारिता क्षेत्रमा जम्ने चाहना राख...
काठमाडौं, ५ पुस । सहारा खापुङ अभिनित खगेन्द्र यक्सो र सुनिता सुब्बाको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजानिक भएको छ । यक्सोकै रचना र संगीतमा ‘मायाले पर्खिबसेको…’ गीत भिडियोमा सार्वजानिक भएको हो । परदेश गएको श्रीमानलाई सम्झिएर विरक्तिएको भावलाई समेटेको गीतलाई एरेन्ज र मिक्स चन्दु गोर्खालीले गरेका हुन् । जीवन श्रेष्ठको छायांकन, क...
काठमाडौं, ५ पुस । यसै हप्ता गायक लक्ष्मण लिम्बू र मञ्जु लावतीको स्वरमा रहेको ‘सारङ्गीको मिठो धुन’ सार्वजानिक भयो । म्युजिक भिडियोसहित सार्वजानिक भएको गीतमा साहारा खापुङ मोडलको रूपमा देखिएकी छिन् । नेपाली तथा नेपालमा रहेका आदिवासी मुहारमा केही फरक ‘लुक्स’ लिएर आएकी साहाराको यो पहिलो म्युजिक भिडियो भने होइन । उनले सार...